Global Voices teny Malagasy » Japana: Mandona Be Ilay Amerikana Iray Mpihira Enka · Global Voices teny Malagasy » Print
Japana: Mandona Be Ilay Amerikana Iray Mpihira Enka
Voadika ny 10 Avrily 2018 20:28 GMT 1	 · Mpanoratra Hanako Tokita Nandika Vero
Sokajy: Azia Atsinanana, Japana, Fifindràmonina, Foko sy Fiaviana, Mediam-bahoaka, Mozika, Zavakanto & Kolontsaina
Jero , Amerikana voalohany indrindra mpihira enka , no lasa fotodresaka ao amin'ny tontolon'ny bilaogy Japoney tamin'ny herinandro lasa teo rehefa namoaka ny hirany voalohany miaraka amin'ny singankirany “Umiyuki (Mer de Neige)” izy. Tonga teo amin'ny laharana fahefatra tao anatin'ny fandaharan-kiran'ny Oricon  ilay singankira, nametraka rakitsoratra teo amin'ny enka sy tao amin'ny Laharana 10 voalohany ho anà singakira enka voalohany .
Nampivelatra ny fitiavany enka nandritra ny fitomboany tanatin'ny fihainoana hira niaraka tamin'ny renibeny Japoney i Jero, teraka Jerome White Jr. tao Pittsburgh. Vantany vao nivoaka tao amin'ny Anjerimanontolon'i Pittsburgh niaraka tamin'ny maripahaizana momba ny siansan'ny fampahalalam-baovao izy dia nifindra trano tao Japana miaraka amin'ny nofinofy ho lasa mpihira enka. Raha izy mbola niasa ho mpampianatra Anglisy ary avy eo injeniera informatika, no hitan'ny mpamoaka rakikira iray tamin'ny alàlan'ny fampisehoana samihafa tanatinà fifaninana mihira tao an-toerana ary nampiakatra ny lazany tao Japana avy eo.
Niteny i 1ko2ko3kon  fa nanome aina vao ny enka i Jero:
Efa nahavita nanome aina vao ho anà fiarahamonin'ny enka izay tafajanona tanaty fahazarana i Jero. Mahafinaritra be izany. Tena manantena aho fa hanome aingampanahy an'ireo mpanoratra tononkira, mpamoronkira ary mpihira ny hatsaran'ny enka an'i Jero mba hanitarana ny fetran'ny kayōkyoku .
Ny sasany aminareo izay miasa mafy ary mikendry ny ho lasa mpihira enka, Jero, izay nivoaka tao aorianareo, dia efa nialoha haingana anareo. Sahady, tsy mahita azy akory aza ianareo. Tsy hahavita izany mihitsy ianareo raha mbola manohy ny dian'ny enka efa mahazatra. Manaraha ary mamorona zavatra izay manintona ny mpihaino anareo. Hivelatra amin'izay ny talentanareo.
Mahita fitovizana misimisy eo aminy sy i Jero ary maniry ny fahombiazan'ilay mpihira i Dan Markoff , Amerikana mpilalao horonantsary miezaka ny hipetraka ao Japana.
Etsy andaniny, tsy tena resy lahatra tanteraka ity bilaogera iray ity :
Misy tantara ambadika samy hafa ho an'ireo sanganasa vokarina, izany no antom-pisian'ny karazany maro eo amin'ny tontolon'ny mozika sy ny kanto. Ka manontany tena aho hoe raha ny endrika fotsiny no alàna amin'ny tontolony ary alain-tahaka, hampihetsi-po ny olona ve, ary mba haharitra ve?
Maninona no tsy maintsy mihira momba ny fotoan-dririnin'ny Ranomasin'i Japana izy?
Mampiseho fijery hafa i mario in bonn . Miteny izy fa matimaty loatra amin'ny “maha-Japoney azy” ny vahoaka Japoney:
Tamin'ny izaho nivezivezy tanaty aterineto, nahita mpihira enka mainty hoditra aho, mitondra ny anarana hoe Jero, izay vao nanomboka tsy ela.
Mitovy taona amiko izy! Ary mahay mihira koa! Hitako fa manova ny mahita olona tanora mankafy enka ary manomboka mihira enka. Nahita lahatsary misy azy mihira tanatinà fandaharana vitsivitsy tamin'ny fahitalavitra aho, saingy anatin'ny ankamaroan'izy ireny dia ahitàna fanehoankevitra tahaka ny hoe
“mihira enka izy kanefa tsy mitovy aminà Japoney akory!”
“mahay izy na dia tsy Japoney aza”
Midika ve izany fa mihevitra ny maha-Japoney ho zavatra miavaka ry zareo?
Anatin'ity tontolontsika ity, misy olona tsy Japoney kanefa mahatakatra ny kolontsaina Japoney mihoatra nòho ny Japoney, ary tsy mitovy amin'ny Japoney kanefa mahay miteny Japoney tsara.
Mahazatra io zavatra io.
Toa mino mafy ny Japoney fa “Ny Japoney ihany no afaka manakatra ny kolontsaina Japoney”
Aty Alemaina aho ary nianatra be ny momba ny kolontsaina Alemàna sy ny fombafombany, saingy raha nisy niteny ahy fa “ny Alemàna ihany no afaka manakatra ny kolontsaina Alemàna”, dia mety tsy te-hianatra ny momba an'i Alemaina aho. Tahaka ny dona ara-kolontsaina nafotitra ilay izy.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/04/10/116267/
 nametraka rakitsoratra teo amin'ny enka sy tao amin'ny Laharana 10 voalohany ho anà singakira enka voalohany: http://mdn.mainichi.jp/entertainment/news/20080226p2a00m0et027000c.html
 Dan Markoff: http://mdan.jugem.jp/?eid=162
 ity bilaogera iray ity: http://tokyokenso.seesaa.net/article/85050950.html
 mario in bonn: http://mariomaru.exblog.jp/8300030/